सरकार र डा. केसीका प्रतिनिधिबीचको वार्ता पुन: सुरु हुँदै- समाचार - कान्तिपुर समाचार
सरकार र डा. केसीका प्रतिनिधिबीचको वार्ता पुन: सुरु हुँदै
काठमाडौँ — सरकारी टोली र डा. केसीका प्रतिनिधिबीचको केहीबेर स्थगित भएको वार्ता पुन: सुरु हुँदैछ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बिहीबार बिहान साढे १० बजेदेखि जारी वार्ता दिउँसो ४ बजे फेरि बस्नेगरी स्थागित भएको थियो । नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले केहीबेर स्थगित वार्ता पुन: सुरु हुने लागेको जानकारी दिए ।
बिहानदेखि भएको वार्तामा सरकारी टोलीसँग डा. केसीका मागहरुको सम्बन्धमा बुँदागत छलफल भएको बताए । स्रोतका अनुसार वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ ।
डा. कार्कीले आफूहरुले जतिसक्दो छिटो वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन चाहेको समेत बताए ।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न माग राख्दै डा. केसी २५ दिनयता अनशनरत छन् । सरकारले डा. केसीसँग वार्ता गर्नका लागि बुधबार शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो । जसमा मन्त्रालयका सहसचिव डा. गुणराज लोहनी, चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक डा. दिलीप शर्मा सदस्य रहेका छन् ।
सरकारले वार्ता टोली गठन गरेसँगै डा. केसीको तर्फबाट डा. जीवन क्षेत्रीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय टोली गठन भएको थियो । वार्ता टोलीमा चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की, संघका पूर्वअध्यक्ष डा. अन्जनीकुमार झा, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल सदस्य छन् ।
प्रकाशित : आश्विन २२, २०७७ १५:४९
अवार्ड कार्यक्रम 'ठूलो तमासा' हुन् : सैफअली खान
बलिउड अभिनेता सैफअली खान भारतीय अवार्ड कार्यक्रममा उत्ति विश्वास राख्दैनन् । 'बलिउड हंगामा'सँगको अन्तर्वार्तामा उनले आफूलाई दिने भनिएको अवार्ड अरुलाई नै दिएको तीतो यथार्थबारे मुख खोलेका छन् ।
'मेरो करियरमा मैले केही अवार्ड पाएँ, जसका लागि म योग्य थिइनँ भन्ने मानिसहरुलाई लागेको थियो । त्यसमा 'हम तुम' पनि एक हो, जुन फिल्मबाट मैले नेसनल अवार्ड पाएँ । मान्छेहरुले त्यसमा म योग्य थिइनद्द भनेर भने । तर मलाई लाग्छ मैले वर्षौंपछि मैले आफूलाई त्यसका लागि योग्य बनाएँ,' उनले भनेका छन् ।
अवार्ड कार्यक्रममा हुने फेरबदलका विषयमा पनि उनले बोलेका छन् । 'इमान्दारीका साथ भन्नुपर्दा म अवार्ड कार्यक्रममा विश्वास गर्दिनँ । केही वर्षअगाडि मलाई एउटा अवार्ड कार्यक्रममा बोलाइएको थियो । म त्यहाँ पुग्दा कार्यक्रम आयोजकले मलाई भन्नुभयो, 'हामी तपाईंलाई उत्कृष्ट अभिनेताको अवार्ड दिन चाहन्थ्यौं । तर तपाईंलाई थाहै छ यहाँ केके हुन्छ । अब हामी तपाईंलाई कमिक रोलका लागि अभिनेता अवार्ड दिन्छौं,' उनले भनेका छन् ।
अवार्ड कार्यक्रममा हुने यस्तै फेरबदल र राजनीतिले अवार्ड कार्यक्रम एउटा 'ठूलो तमासा' हुने गरेको उनको धारणा छ । उनले भने, 'म त अवार्ड कार्यक्रम स्टेज प्रस्तुतिबाट कमाउने एउटा बहाना देख्छु ।'
पछिल्लो समय अजय देवगनसँग 'तानाजी'मा देखिएका सैफ अमेजोन प्राइमको 'तान्डव'मा देखिँदैछन् । 'तानाजी'का निर्देशक ओम राउतको फिल्म 'आदिपुरुष'मा पनि उनले अभिनय गर्दैछन् ।
प्रकाशित : आश्विन २२, २०७७ १५:४८